Nhau - Kutengesa mota muChina kunopenya sezvese zvepasi rose zvinodzora kubva kuhutachiona
Kutengesa mota muChina kunopenya senge rese reels reels kubva kuhutachiona
Mutengi achitaura nemutengesi mumutengesi weFord muShanghai muna Chikunguru 19, 2018. Musika wemotokari muhupfumi hwakakura hweAsia inzvimbo imwe chete inopenya sezvo denda rinodzikisira kutengesa muEurope neUS Qilai Shen / Bloomberg
Kudiwa kwemotokari kuChina kuri kubva pasimba kuenda pasimba, zvichiita kuti musika wemotokari muupfumi hukuru hweAsia ive nzvimbo yakajeka sezvo denda rekoronavirus rinoisa mutengesi pakutengesa muEurope neUS
Kutengesa kwema sedan, maSUV, minivans uye mota dzinoverengeka dzakakwira 7.4 muzana munaGunyana kubva pagore rapfuura kusvika kumamiriyoni 1.94 mamirioni, China Passenger Car Association yakati Chipiri. Ndiko kuwedzera kwechitatu kwakatwasuka pamwedzi, uye kwaitungamirwa zvakanyanya nekudiwa kweSUVs.
Kuendesa kwemotokari kune vatengesi kwakakwira 8 muzana kusvika 2.1 mamirioni mayuniti, nepo kutengesa kwese kwemota, kusanganisira marori nemabhazi, kwakawedzera 13 muzana kusvika 2.57 mamirioni, data rakaburitswa gare gare neChina Association of Automobile Manufacturers yakaratidza.
Nekutengesa mota muUS neEurope zvichiri kukanganiswa neCOVID-19, kumutsidzira kudiwa kuChina chinhu chakanakira vagadziri venyika nevekunze. Yakagadzirirwa kuve nyika yekutanga pasirese kudzoka kumazinga e2019 vhoriyamu, kunyangwe chete ne2022, sekureva kwevaongorori kusanganisira S & P Global Ratings.
Vagadziri pasirese vakaisa mabhiriyoni emadhora kuChina, musika wepamusoro wemotokari kubva 2009, uko vepakati vari kuwedzera asi kupinda kuchiri kuderera. Zvikwata zvinobva munyika dzakaita seGerman neJapan zvakakunda denda iri zviri nani pane vavakwikwidzi vemuno - mugove wakasanganiswa wemusika wevashambadzi veChinese wakaderera kusvika pa36.2 muzana mumwedzi misere yekutanga kubva panhamba yepamusoro ye43.9 muzana muna 2017.
Kunyangwe musika wekuChina wemotokari uchipora, inogona kuramba ichinyora kuderera kwayo kwechitatu pagore mukutengesa, Xin Guobin, mutevedzeri wegurukota ku Ministry of Industry and Information Technology, akadaro mwedzi wapfuura. Izvi zvinodaro nekuda kwekuderera kwakanyanya kwakatambura pakutanga kwegore, panguva yekukwira kwekupararira.
Zvisinei, kukosha kweChina kunowedzerwa nekutarisa kwaro kusimudzira magetsi-mota ecosystem, tekinoroji inoshanduka umo vagadziri vakaisa mari yakawanda yenguva nemari. Beijing inoda nyowani-simba mota kuti dziverenge 15 muzana kana kupfuura yemusika muna 2025, uye inenge hafu yezvose zvinotengeswa makore gumi gare gare.
Mahesera eNeVs, ane mota dzakachena dzemagetsi, plug-in mahybrids uye mafuta-maseru mota, yakawedzera 68 muzana kusvika zviuru gumi nezvisere nezviuru zana, rekodhi yemwedzi waGunyana, sekureva kweCAAM.
Tesla Inc., iyo yakatanga kuendesa kubva kugigafactory yayo yeShanghai pakutanga kwegore, yakatengesa 11,329 mota, zvichidzika kubva pa11,800 muna Nyamavhuvhu, PCA yakati. MuAmerican carmaker akaronga wechitatu muma NEV wholesales mwedzi wapfuura, kuseri kweSAIC-GM Wuling Automobile Co uye BYD Co, PCA yakawedzera.
PCA yakati inotarisira maNEV kubatsira kutyaira kwese auto kutengesa kukura mukota yechina nekuunzwa kwemhando nyowani, dzemakwikwi, nepo simba muYuan richizobatsira kudzikisa mitengo imomo.
Kutengeswa kwemotokari kwese kwegore rakazara kunofanirwa kunge kuri nani pane fungidziro yapfuura yechikamu chegumi muzana yekutenda nekuda kwekudzoreredzwa kuri kudiwa, akadaro Xu Haidong, mutevedzeri wemainjiniya mukuru paCAAM, asingataure.
Shock Inotora Bolt, Wheel Hub, Tire Bhora Rakabatana, Shock Yekupinza Rubber, Hood Shock Inotora, Mberi Kudhiraivha Gonhi,